Dambiyo basaasnimo oo ay wada galeen Sacuudiga iyo Imaaraatku. Maxay tahay ujeedada kuwa ku lugta leh iyo bartilmaameedoodu? - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Dambiyo basaasnimo oo ay wada galeen Sacuudiga iyo Imaaraatku. Maxay tahay ujeedada...
Dambiyo basaasnimo oo ay wada galeen Sacuudiga iyo Imaaraatku. Maxay tahay ujeedada kuwa ku lugta leh iyo bartilmaameedoodu?
Su’aalo badan ayaa kasoo baxaya arrinta basaasnimada ee ay ku lug leedahay maamulka Israel, xogo tilmaamaya sida uu u balaadhanyahay ee loo adeegsaday nidaamkaa basaasnimo ayaa muujiyey inuusan ku koobnayn arimo sirdoon. Hadaba maxay tahay arintu?
Uma baahna dhammaan buunbuunintan caalamiga ah, wargeysyada, bogagga wararka, iyo bayaannadu si loo xaqiijiyo iskaashiga sirdoonka amniga ee u dhexeeya Saudi Arabia, UAE iyo Israel. Waa isbahaysi dagaal oo ay dano isu keeneen danahaa oo leh dhinacyo badan, kuwaa oo si qoto dheer ugu xidhan iskaashiga sanadaha badan, illaa ay ka timid in ay si cad u saxeexaan heshiis buuxa.
Dembiyada isbahaysigan, ee lagu ogaaday fadeexadan basaasnimo ee barnaamijka Israel “Pegasus”, waxay muujinaysaa in isbahaysi kale uu ka dhex jiro isla qolyahaa, kaasoo shirkad Israel ah ay maamulayso iyadoo taageero ka helaysa dowladda khasabka ku haysata dhulka Falastiin ee Israel, waxayna adeegyo ammaan u fidisay Riyadh iyo Abu Dhabi.
Ujeeddooyinka & halista ay leedahay hawshaasi, laga soo bilaabo bilowga illaa inta laga war helay. Waxaa jira waxyaalo aan wali caddeyn, waayo bartilmaameedka waxaa ka mid ah Al-Mayadeen tv iyo wargeyska al-Akhbar.
Maalmaha soo socda ayaa laga yaabaa inaan helo xogo faahfaahsan oo buuxa. Hayeeshee waxaan xaq u leenahay inaan wax ka ogaano ujeeddooyinka aynuna helo magacyada la kashifay iyo aqoonsigooda. Taasi ma digniinbaa, u digidbaa, mise waa hanjabaad?
Bishii Juun 2017, Maxamed bin Salmaan wuxuu noqday amiirka dhaxal sugaha ah. Isla bishaas, kulan qarsoodi ah oo u dhexeeya Sucuudiga iyo Israa’iil ayaa ka dhacay Qubrus, sida uu sheegay wargayska Ingiriiska ee The Guardian, kulankaasina wuxuu ku saabsanaa nidaamka basaasnimada Israa’iil ee Pegasus.
Sida laga soo xigtay wargayska Guardian, taasi waxay ahayd sidii uu Sucuudigu doonayay, waxaana la gaadhay heshiis dhan 55 milyan oo doolar, iyada oo qandaraas deg deg ah la siiyay dawladda gumaystada Israa’iil.
In sidaa la yeelo waxay dan u ahayd Israel, iyo arimaheeda amni ee ay ka leedahay waddamada carabta ee u dhow iyo gobolka dhamaantii, oo ay ku jiraan Saudi Arabia iyo UAE, taas macnaheedu waa iskaashi basaasnimo oo adduunka oo dhan ah. Waxaa markii dambe soo baxday in isbahaysigaa amni uu ku jiray geeddi-socod siyaasadeed oo la samaynayay, tiirarkiisa u wayn ee sirdoona ay ahaayeen isbahaysi dagaal oo ka dhan ah Iiraan iyo xoogaga wax iska caabinta.
Isu janjeedhintaa iyo waxa huursan, saraakiisha Sucuudiga iyo Imaaraatku waxay doorteen waddo ah inay la shaqeeyaan Israa’iiliyiinta, waana denbi ay diidday Qaramada Midoobay, waxay Amnesty International ku tilmaamtay inay tahay fadeexad weyn oo caalami ah. Yaa ka dambeeya fadeexadan iyo ogaanshaheedu?
Previous articleJaalkii Trump Barrack ayaa waaxda Caddaaladdu xidhay waxayna ku eedeysay inuu shisheeye uga ololeeyey maraykanka
Next articleHorumaro cusub oo ay gaadheen ciidamada Yemen iyo dagaalyahanada taageera ee ku sugan Al-Bayda
Maxkabadu waxay dib u dhigaysaa guryo ka saarista qoysaska “Sheekh Jarrax”
Israa’iil awood ay ugu hanjabto Iran malaha.
Baydhaba waxaa lagu doortay qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka odayaasha Soomaaliya
Hassan Mohamud - August 1, 2021
On top of all the challenges Israel’s new Prime Minister Naftali Bennett already faces in trying to hold an unlikely, ideologically-diverse ruling...
‘A medieval battle’: Officers reveal horrors they faced defending Capitol on...
An agreement on the withdrawal of US forces from Iraq